31 မၢၶျ်ႉ 2011; 10 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2011-03-31)
↑ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း. နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆). Retrieved on ၃၁ မတ် ၂၀၁၆။[permanent dead link]
↑ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း. နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆). Retrieved on ၃၁ မတ် ၂၀၁၆။[permanent dead link]
↑ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အဖွဲ့ဝင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၂၂/၂၀၁၈). နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး (၁၈ မေ ၂၀၁၈). Retrieved on ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။[permanent dead link]
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ3သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 00:03